Mutambo wevadiki Husiku Husiku, yemahara kwenguva shoma | IPhone nhau
Mutambo wevadiki Husiku Husiku, yemahara kwenguva pfupi
Zvekare zvidiki zveimba zvekare zvakare ma protagonists emutambo isu atinokuratidza nhasi kuti utore mahara. Husiku hwakanaka mutambo uri muchimiro chenyaya iyo mudiki pane imba ichafanirwa batsira mhuka dzese kugadzirira usati warara. Uyu mutambo unoitirwa vana vanosvika makore mashanu, uye zvirokwazvo, uchave mumwe wevanofarira mafomu vasati vaenda kunorara mazuva ese, kunyanya kune avo panguva yekurara inova hondo yekukwira. Zvese kuvabereki uye kune vadiki mumba. Ichi chishandiso chine mutengo wenguva dzose we 2,99 euros muApp Store asi kwenguva yakati wandei tinokwanisa kuikanda mahara.
Iyo michina yemutambo iri nyore kwazvo. Vana vanofanira kuputira mhuka uye kudzima mwenje kuitira kuti vazorore kusvikira zuva rinotevera. Kuburikidza nerwendo rwedu rwekurima, tichafanirwa kutaura husiku hwakanaka kune imbwa, nguruve, gwai, dhadha, mhou, huku, tsuro ...
Zvinoenderana nemwaka wegore watiri iyo kumashure kwechishandiso inotiratidza imwe mufananidzo kana imwe. Tinogona kushandisa otomatiki modhi, kana zvisiri isu tinoda kuti mwana wedu ataure nemutambo, asi kuti itambe otomatiki, chiitiko chingango dzivirira mwana wedu kuti arege kurara uye kufara nezve iyo iPhone, iPad kana iPod touch uye kuda kuramba ndichitamba.
Uyu mutambo unowanikwa mumitauro yakawanda, saka zvakare inogona kunge iri nzira yakanaka yemwana wedu kudzidzira mitauro diki asati arara. Husiku Hwakanaka hwakagadzirwa naHeide Wittlinger, muimbi akasarudzirwa maOscars a2002, yehupenyu hwakanaka hupfupi, iyo inotipa imwezve vimbiso nezvehunhu hwekunaka hwatinoitirwa nemutambo.
Manheru akanaka!4,49 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Mutambo wevadiki Husiku Husiku, yemahara kwenguva pfupi
Haisi yemahara !!!
Kwenguva yakati rebei, zita racho rinototaura saizvozvo.
8x23 Podcast: Iyo Tsvuku iPhone yaKurume
Iyo Apple Watch 3 ichave iine skrini nyowani